लिभरपूल र स्पर्सलाई सबै भन्दा ठुलो झड्का !! पी.एस.जि र बार्सिलोनाको विजय यात्रा ! - Experience Best News from Nepal
प्रकाशित मिति : बिहिबार, अशोज १८, २०७५
जारी च्याम्पियन लिग फुटबल खेल म्याच डे २ अन्तर्गत भएको खेलमा लिभरपूल १-० गोल अन्तरले नापोली विरुद्धको खेलमा पराजित भएको छ। प्रिमिएर लिगमा लिभरपूलले सिजनको सुरुवात राम्रो गरेको छ साथै च्याम्पियन लिगको पहिलो खेल पी.एस.जि विरुद्ध पनि बिजयी भएको थियो तर म्याच डे २ मा लिभरपूलको पदर्शनमा फितलो भएको मान्न सकिन्छ। इटालीमा स्टेडियो स्यान पौलो मैदान नापालीको घरेलु मैदानमा भएको उक्त खेलमा नापोलीका इन्सिगनेले ९० औ मिनेटमा गोल गर्दै लिभरपूल माथि विजय प्राप्त गरेको हो।
इटालियन टिम नापोलीको खेलमा निकै डिफेन्स देखियो लिभरपूलका निमित एक बल पनि अन टार्गेट थिएन साथै बल सट समेत रेड्सको ४ र नापोलीको १४ रहेको थियो। ६७५ पास खेलेको नापोली हर प्रयास्मा अबल देखिएको थियो।
पी.एस.जि विरुद्ध रेडस्टार
नेमाइरको ह्याट्रिकसँगै पेरिस सेन्ट जर्मेनले च्याम्पियन्स लिगमा रेड स्टार बेलग्रेडमाथि शानदार जित हात पारेको छ । बुधबार राति भएको खेलमा पीएसजीले रेड स्टारलाई ६–१ गोल अन्तरले हराएको हो ।
पेरिसमा भएको खेलमा घरेलु टोलीले २० औं मिनेटमा नेइमारको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । दुई मिनेटपछि नै उनले दोस्रो गोल गरे ।३७ औं मिनेटमा काभानी र ४१ औं मिनेटमा डी मारियाले गोल गर्दै पहिलो हाफमा घरेलु टोलीलाई ४–० को अग्रता दिलाए ।दोस्रो हाफको ७० औं मिनेटमा केलियन एम्बाप्पेले गोल गरे । चार मिनेटपछि भ्रमणकारी टोली रेड स्टारका मरिनले गोल गरेका थिए ।
तर, ८१ औं मिनेटमा नेइमारले ह्याट्रिक पुरा गर्दै पीएसजीलाई ६–१ गोल अन्तरको फराकिलो जित दिलाएका छन् ।
वेबम्लीमा बार्सिलोनाको बिजयी झन्डा
लियोनल मेस्सीको दुई गोलसँगै बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिगमा टोटनह्यामलाई हराएको छ ।
वेम्बलीमा सुरुवाती दुई गोलले खाएको टोटनह्यमले दोस्रो हाफमा पुनरागमनको संकेत देखाएको थियो । तर, मेस्सीको दुई गोलसँगै बार्सिलोना ४–२ गोलले विजयी भएको छ ।खेलमा बार्सिलोनाले दोस्रो मिनेटमा नै काउटिन्होको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । २८ औं मिनेटमा राकिटिकले गोल गरेपछि पहिलो हाफमा २–० ले अगाडि रह्यो ।
दोस्रो हाफको ५२ औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्यारी केनले घरेलु टोलीलाई खेलमा फर्काउने संकेत गरे । तर, चार मिनेटपछि नै बार्सिलोनाका मेस्सीले गोल गरे ।
खेलको ६६ औं मिनेटमा लामेलाले गोल गर्दै बार्सिलोनाको अग्रता ३–२ मा झारे । तर, निर्धारित समयको अन्तिम मिनेटमा मेस्सीले दोस्रो गोल गरेपछि बार्सिलोनाको जित सुनिश्चित भयो ।
प्रिमिएर लिगमा आज हुदै छन् यी ठुला खेल !! जान्नुहोस कुन खेल कुन समयमा हुदै
उपाधि दावेदार दुइ क्लब: भिडन्त आज कसको अवस्था कस्तो !! सिटी विरुद्ध लिभरपूल
पुन नेमार घाइते , एक खेल मात्रै गुमाउन सक्ने : टुचेल
रोनाल्डो बिना उत्रेको युबेन्ट्सका निम्ति डिबालाले गरे हाफ अगी २ गोल?
Lionel MessiLiverpoolPSGuefa champions league